५ खेलाडी जाे अन्तिमपटक विश्वकपमा देखिदै - Nepal Cricket
५ खेलाडी जाे अन्तिमपटक विश्वकपमा देखिदै
आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको १२ औं संस्करण अब केहि हप्ता मात्र बाँकी रहेको छ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा आयोजना हुने विश्वकपमा केहि खेलाडीले मात्र विश्वकप खेल्ने मौका पाउने गर्छन् ।
खेलाडी जीवन औषतमा १० देखि १२ वर्षको रहने हुँदा क्रिकेटको महाकुम्भ विश्वकप खेल्न पाउने खेलाडीलाई निकै यादगार तथा गर्वको बिषय हुन्छ । कतिपय खेलाडीले भने धेरै संस्करणको विश्वकप खेल्ने अवसर पाउछन् ।
हालसम्म भारतका महान खेलाडी सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानका जाभेद मियादले सर्वाधिक ६ संस्करणको विश्वकप खेलेका छन् ।
यस संस्करण विश्वकप केहि खेलाडीको लागि भने अन्तिम विश्वकप हुनेछ । विश्वकपपछि ती खेलाडीले सम्भवत सन्यास घोषणा गर्नेछन् ।
इंग्ल्याण्ड र वेल्सको विश्वकप अन्तिम विश्वकप हुने ५ खेलाडी को को हुन् त ?
भारतका पुर्व कप्तान धोनी ३७ वर्ष पुगि सकेका छन् । १२ औं संस्करणको विश्वकपका लागि उनले टिममा स्थान बनाएपनि अर्को संस्करणमा उनी देखिने छैनन् ।
अर्को संस्करणको विश्वकप आयोजना हुँदा धोनी ४१ वर्षका हुनेछन् । हाल उनी अन्य खेलाडी भन्दा फिट छन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । तर, आगामी संस्करणमा उनलाई उमेर र स्वास्थले दिने छैन ।
यसअघि धेरै समर्थकले गरेको धोनीको अन्तिम विश्वकप सन् २०१५ को हुने आँकलन विफल भएको थियो।
युनिभर्सल बोसको उपनामले परिचित वेष्ट इण्डिजका गेलले विश्वकप पछि एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
३९ वर्षे गेल एकदिवसीयमा १० हजार रन पुरा गर्ने विश्वका १४ औं र वेष्ट इण्डिजका दोस्रो खेलाडी हुन् । उनी वेष्ट इण्डिजका सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी पनि हुन् । वेष्ट इण्डिजबाट उनले सन् २००४ मा च्याम्पियन्स ट्रफी र सन् २०१६ को टी-ट्वान्टी विश्वकप जितिसकेका छन् ।
गत संस्करणको विश्वकप दक्षिण अफ्रिकाको लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको थियो । सोही टिमका सदस्य रहेका फास्ट बलर डेल स्टेन लामो समयको अन्तरालपछि क्रिकेटमा फर्किएका छन् ।
४. रोस टेलर
३५ वर्षे न्युजिल्याण्डका खेलाडी टेलरले ३ संस्करणको विश्वकपमा सहभागिता जनाईसकेका छन् । उनलाई न्युजिल्याण्डका एक सफल खेलाडीको रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
विश्वकप नजिकिदै गर्दा उनी उत्कृष्ट लयमा देखिएका छन् । तर, अर्को संस्करणमा उनी ३९ वर्षको हुने हुँदा अहिलेकै प्रदर्शनलाई कायम राख्ने कुनै अधार छैन । त्यस्तै सन् २०२३ को विश्वकपसम्म उनले खेल जीवन छाडि सक्नेछन् ।
५. डेभिड वार्नर
यस विश्वकप वार्नरको अन्तिम विश्वकप आँकलन गरिएको छ । हालै सकिएको आईपीएलमा निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका उनले ओरेन्ज क्याप हात पारेका थिए । तर, अर्को संस्करणसम्म उनलाई उमेर र स्वास्थले दिने छैन । ब्याटिङ गर्न निकै भोको देखिने वार्नर सन् २०२३ को विश्वकपमा ३६ वर्ष पुग्नेछन् ।